» Muqaal:Hotelka saldhiga u ahaa musharixiinta isbadal doonka oo aan laga seexan iyo musharixiinta oo jeegagii ugu badnaa baxshe hada…Badweyntimes.com
Muqaal:Hotelka saldhiga u ahaa musharixiinta isbadal doonka oo aan laga seexan iyo musharixiinta oo jeegagii ugu badnaa baxshe hada…
Shabakada Badweyn.com ayaa muqaal kaheshay hotelka oo kasocda olalaha doorashada musharixiinta labaxay isbadal doonka kasoo saldhig kadhigtay hotelka weyn ee Jazeera.
Musharixiinta utaagan xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa habeenimadii xalay aan sexan ayadoo la arkaayay ayagoo raxan raxan ula kulmaya xildhibaanada isla markaa xod xodasho kula jira xildhibaanada sida uheli lahayeen codad badan.
Musharixiinta ayaa la arkaayay ayagoo saqda dhexe xalay lacago farabadan u qeybinaayo xildhibaanada si ugu codeyaan maanta oo lagu wado in ay dhacdo doorashada madaxweynaha soomaaliya.
Dhamaan musharixiinta kasoo horjeyda madaxweynaha soomaaliya ayaa ku heshiiyay in codka isugu geyan hadba musharaxa ugu codka batta waxaana laga yabaa in oo kasoo baxo mid kamid ah musharixiinta isbadal doonka ah.
« Warbixinta Ka HoreysayDhageyso:Shaqsi u eg Gabre oo kamid noqde xildhibaanada iyo shacabka oo sheegay in gabre xildhibaan noqde?
Warbixinta Xigto »Daawo:Xildhibaan qura oo baahiyay in codka siin doonin MD Xasan Sheekh isbadalna Uhiilin doono